cheetainer,cubitainer,water containers,jerry can,bag in box
Nweta sample na akwụkwọ foto efuGaa
Ngwaahịa anyị bụ isi na-akwakọ ọnụ bụ cheetainer (akpa kwụ ọtọ n'ime igbe), ldpe cubitainer, akpa mmiri na-ada ada, obere mpịachi jerry na igwe na-ejuputa.
Dị ka ngwaahịa mbukota ọhụrụ anyị, akpa cheetainer bụ nke plastik multilayer mere. Igwe dị n'elu (polyamide + polyethylene) na-echebe site na ikuku oxygen na mmiri; njupụta ya na ihe mejupụtara ya nwere ike ịdị iche dabere na mkpa nke onye ahịa ma ọ bụ ngwaahịa. Igwe dị n'ime (polyethylene) na-agbanwe ma na-eguzogide ịdọkasị ahụ. Ọ bụ ihe ọzọ dị larịị na nkwakọ ngwaahịa mmiri mmiri ọdịnala, na-enye uru nke akpa siri ike yana nkwado na-agbanwe agbanwe gbasara njem na ihe nchekwa chọrọ. Ọ ga-echekwa ihe ruru 80-90% n'ikike ụlọ nkwakọba ihe yana mbelata yiri nke ahụ na ọnụ ahịa ụgbọ njem n'ime yana ịchekwa ikuku CO2.
A haziri igbe ahụ nke ọma. Dị ka a na-eji kaadiboodu eme ya, enwere ike ibipụta akụkụ niile, nke na-enye nnukwu ebe nkwurịta okwu.
Vidiyo ule nrụgide
Chọpụta ANYỊ Isi Ngwaahịa
Mgbanwe na nro, Na-ada ada na fechaa, Mbelata ọnụ ahịa
akpa cheetainer n'ime igbe
Anyị ogbako na-onwem na 4 tent igbu ịkpụzi igwe (Model 25A); 2 na-esetịpụ igwe na-akpụzi ịgbanye kwụ ọtọ nke 120g, igwe 4 na-akpụzi igwe kwụ ọtọ nke 125g, igwe 2 na-akpụzi igwe kwụ ọtọ nke 80g, igwe na-eme akpa 2.
Anyị nwere ike ịnye 1 liter ruo 50 lita akpa cheetainer n'ime igbe; Na anyị nwere ike inye cubitainers si volum 1 lita 25 lita.
Anyị nwere ngwaahịa maka akpa ọkọlọtọ niile. Ahịrị mmepụta anyị na-arụ ọrụ awa 24.
Ụlọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara 8000㎡
Enwere ndị ọrụ 60
12 afọ nke mmepụta ahụmahụ
Ụlọ ọrụ na-adịghị uzuzu
4000㎡ ime ụlọ dị ọcha
Ahịa na ngwa
Condiments na ihe ọṅụṅụ: Japanese n'ihi / soy sauce / mmanya mmanya / mkpụrụ osisi ihe ọṅụṅụ / seasoning / akwa ọcha mmiri mmiri
Ahụike: Ultrasonic gel / Hemodialysis / reagent ọbara
kemịkalụ ụlọ ọrụ: fatịlaịza mmiri / ink ụlọ ọrụ / Ddetergent / Paint
Nlekọta ụlọ: ihe na-efe efe/ihe nhicha aka/Shampoo na ịsacha ahụ
Kedu ndị ahịa anyị na-ekwu?
Ezigbo mma dị mma. Ihe niile na-arụ ọrụ dị ka akọwara ya. Akpa kwụ ọtọ nyeere aka belata ọnụ ahịa logistic mgbe ọ siri ike ma sie ike dị ka ewepụtara.
John bụ n'ezie na-enyere aka ma na-ejere anyị ozi ọkachamara na enweghị ntụpọ nkwurịta okwu. Anyị ga-maa zụta n'aka ya again. Daalụ maka nkwado gị!
Ajụjụ maka ndepụta ọnụahịa
Ebe ọ bụ na e guzobe ya, anyị factory na-azụlite mbụ ụwa ngwaahịa na adhering ụkpụrụ nke àgwà mbụ. Ngwaahịa anyị enwetala aha ọma na ụlọ ọrụ na ntụkwasị obi bara uru n'etiti ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie.
Akpa BIB n'ime igbe bụ nke zuru oke ...
Nkwakọ ngwaahịa akpa-in-the-igbe, nke a na-akpọ nkwakọ ngwaahịa BIB, bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa kacha aga nke ọma na nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ zuru ụwa ọnụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya. N'ihi njirimara ya nke nchekwa, ahụike, ịdị mma na nchekwa gburugburu ebe obibi, ọ malitere ngwa ngwa n'ime nkwakọ ihe ọṅụṅụ ...
Otu esi ewusi qual...
Ihe mejupụtara akpa n'ime igbe bụ akpa nwere ngwaọrụ mpụta mmiri na katọn corrugated n'èzí. E jiri ya tụnyere ụdị nkwakọ ngwaahịa ọdịnala, akpa igbe nwere ogologo ndụ nchekwa (igbe mmanya, ihe ọ juiceụụ mkpụrụ osisi nwere ike idowe akpa akara 2-3 afọ, mgbe mmeghe nwere ike ịchekwa ọnwa 2), ka mma zere ìhè…
Akpa n'ime igbe bụ nke kacha envi ...
Akpa-in-a-igbe bụ usoro nkwakọ ngwaahịa kachasị mma na gburugburu ebe obibi maka mmiri ọṅụṅụ dị oke ọnụ, na-eji 80% obere ihe nkwakọ ngwaahịa karịa karama PET ma ọ bụ bọket PC kwa olu nke mmiri ọṅụṅụ, nke pụtara obere plastik na obere ihe mkpofu. Obi abụọ adịghị ya na pro ...